Daraasad Muujineysa Dhinaca Madow ee Ay Leedahay Xaasidnimada. – The Voice of Northeastern Kenya
Daraasad Muujineysa Dhinaca Madow ee Ay Leedahay Xaasidnimada.
Koox khubarayal ah oo ka tirsan jaamacadda MGPPU university ee dalka Ruushka ayaa sameeyay daraasad ku aaddan rabitaanka qofka inuu noqdo mid dhammeystiran iyo saameynta baban ee ay ku yeelanaso fikirkiisa oo xaasidnimo ay u horseedi karto.
Cilmi-baarayaashu waxey sare u kac ka dareemeen intii ay daraasaddooda wadeen welwelka iyo walbahaar ka qeybgalayaashii daraasadda, iyagoo arrintaa u aaneeyay heerka sare ee tartartanka iyo saameynta ay dhalinyarada ku reebto.
Marina Sorkova oo ah Professor Applied Mathematics-ka, ayaa sheegtay in kala bar dadkii ay xaasidnimada ku arkeen ay la dhibaatooneyayeen rabitaanka iney noqdaan dad dhammeystiran, inta badan dadkaa waxaa ku dhaca niyad jab sidii ay rabeen si ka duwan marka ay arkaan, arrintaas oo marka dambe ku ridda wadada xaasidnimada.
Cilmi-baarayaasha ayaa waxey si gaar ah u eegeen doonista qofka inuu dhammeystirnaado iyo xiriirka ay la leedahay xaasidnimada oo ay yiraahdeen waa aasaaska cudurrada caqliga waxa u sababta ah.
Waxey intaa sii raacisay, in tilmaamaha xaasidnimada uu xiriir la leeyahay raadinta qofka inuu noqdo mid dhammeystiran, arrintaas oo keenaysa inaanuu ogolaan in cid kale ka sare marto ama ka wanaagsanaato.
Cilmi-baarayaashu xaasidnimada waxey u kala qaadeen labo nooc mid “wax dhista” iyo mid “wax burburisa”.
Khubaradii daraasaddan diyaarisay waxey ku talinayaan in qofku uu ku dadaalo inuu naftiisa horumariyo, si uu u kasbado quluubta dadka kale iyo jaceylkooda, waxeyna tilmaameen in laga dheeraado in uu qofku raadiyo inuu noqdo mid dhammeystiran, maadaama ay dhibaatooyin badan oo xaasidnimadu ka mid tahay ay la socdaan.
Tan wax dhista waa tan qofka ku xambaarta inuu naftiisa sii horumariyo, tan wax burbursaana waa midda qofka uu isku dayo inuu ficillo xun xun uu ku dhaqaaqo, arrintaas oo dhankeeda u keenta in qofka ay ku dhacaan cudurro dhanka maskaxda ah.
XIGASHO :website-ka Psychological Counseling iyo Psychotherapy.
← AMISOM oo dhamaystirtay ka bixitaankeeda Stadium Muqdisho.
Xubin cusub oo jirka binaadamka katirsan oo la ogaaday →